dgn - Peeji nke 2 - Geofumadas
5 Ihe dị mkpa banyere Nwee ike 2012
Ndị na-agbaso akaụntụ @geofumadas na Twitter ga-ahụla ụbọchị abụọ zuru ezu maka akara hashtag # BeIn2012. Imelite ngafe nke lekwasị ọdịnaya nanị ụbọchị atọ, nke a bụ nchịkọta nke 5 ihe na-eguzo si ịbụ ndị sitere n'ike mmụọ nsọ: 1. Ihe kacha adọrọ mmasị oru ngo nke 57 finalist oru ngo, ọ kpọrọ m…
M-nlereanya, laghachi talent
Mgbanwe nke teknụzụ dị na mpaghara mgbakọ ahụ dị mgbagwoju anya, iwu Moore ejiriwo ikwesị ntụkwasị obi gosipụta na ọ gaghị ekwe omume n'ime afọ abụọ iji Windows 7 na-enweghị ahụ dị ka prehistoric. AutoCAD 2013 na-ada ụda na ọgbakọ na anyị emechabeghị taa AutoCAD 2012 ọhụrụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile taa nwere ike ...
Bụrụ ụbọchị nchịkọta Mgbasa Ozi Ike
Ugbu a, anyị nwere ụbọchị mbụ, tupu Enwee Mmasị, kara aka maka ndị nta akụkọ; site na nnukwu usoro Bentley Systems nwere olile anya ịkwaga na ọkwa mgbasa ozi. Maka ugbu a, mmetụta mbụ m. Pointools yiri ka ọ bụ ihe kachasị mma Bentley, n'echiche m. Otu ụlọ ọrụ dị mkpa na onye bụbu CEO nke ...
Microstation, site na nsụgharị 8.9 (XM) na-eweta usoro arụmọrụ iji nwee mmekọrịta na Google Earth. Na nke a, achọrọ m ịkọwa mbubata nke ụdị akụkụ atọ na onyinyo ya, ihe yiri nke AutoCAD Civil 3D na-eme. A na-arụ ọrụ ndị a site na ime: Ngwaọrụ> ala ma ọ bụ bụrụ Microstation ...
Geofumadas: afọ 30 nke AutoCAD na Microstation
Mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 nke mmemme abụọ a, nke site n'ụzọ dịka ọ bụ otu n'ime mmadụ ole na ole lanarịrị ogologo oge nke akụkọ ntolite evolushọn, ewepụtara m oge iji tụlee isiokwu a iji gosi ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa na usoro a, na anyị ka anyi cheta ihe mere na ihe ...
CadExplorer, chọọ ma dochie ya na faịlụ CAD dika Google
Na ileba anya mbu ọ dị ka iTunes maka AutoCAD. Ọ bụghị, mana ọ dị ka ọ bụ ngwa eji arụpụta echiche nke ihe okike a yana arụmọrụ dịka Google. CadExplorer bụ ngwa na-akwado njikwa data na faịlụ AutoCAD (dwg) na Microstation (dgn). Axiom, ụlọ ọrụ ...
AutoCAD laghachi na Mac
Obi abụọ adịghị ya na ụwa Mac ka mma, mana mgbe ọ bụla anyị nwere obi abụọ gbasara ịkwaga bụ: Kedu ka m ga - esi mee AutoCAD? Wouldnye gaara ekwenye ya, na 1994 AutoCAD R13c42b bụ nke ikpeazụ anyị hụrụ ọkara na-agba na Powermacintosh. Afọ 18 ka nke ahụ gasịrị, AutoCAD maka Mac laghachiri.Ọ bụ n'afọ ahụ ọ kewapụrụ onwe ya na ...
AutoDesk DGN Emmanuel
Microstation Geographics, jikọọ na Data
Ọ bụ ezie na Geographics bụ nsụgharị nke Bentley, mgbe Benley Map na Cadastre bịara nọrọ, ebe a ka m chịkọtara ụfọdụ nkọwa maka nwa akwụkwọ chọrọ ijikọ ebe nchekwa data map na ọrụ Geographics. Site na isiokwu ndị gara aga N'ebe ụfọdụ akọwapụtara m tupu ụfọdụ Geographics guts na-arụ ọrụ, nchịkọta nke ...
Obere ihu Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 6 Next page